कांग्रेस महासमिति बैठकले स्वीकार्ला त ‘हिन्दुराष्ट्र’काे एजेन्डा ? – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — १२ असार २०७५, मंगलवार ०८:५२0comment
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न जिल्ला सभापतिको भेलामा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा जोडदार रुपमा उठेको छ । भेलामा जिल्ला सभापतिहरुले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई महासमिति बैठकबाट पारित गराएर पार्टीको एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्व. खुमबहादुर खड्काले त हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाली कांग्रेस हिन्दु राष्ट्र महाअभियानका रुपमा कार्यालय नै स्थापना गरी निरन्तर संघर्षका लागि समिति नै निर्माण गरेर लागि पर्नुभएको थियो । खुमबहादुरले उठाउँदै आउनुभएको हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा हेटौंडामा चर्किएपछि कांग्रेसभित्र बहस शुरु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत शंकर भण्डारी लगायत दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हिन्दुराष्ट्रका लागि निरन्तर लागि पर्दै आएकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।